Nhau Blog yeIndian Tagged "Actualidad" - THE INDIAN FACE
Aya ndiwo matanho anogona kumisa kudziya kwepasi
Tariro ndicho chinhu chekupedzisira chatinogona kurasikirwa nacho! Izvi zvinoratidzwa nezvakasiyana matanho inoitwa nemasangano anoona, mayunivhesiti uye vanhu vamwe nevamwe vanoda kubatsira kudzikisira kumhanya kwe kupisa kwepasi pose neunyanzvi hwako neunyanzvi. Uye iwe, ndeipi mhinduro yaungafunge nezvayo kumisa shanduko yemamiriro ekunze?
Unoziva nezve kukosha kwe makungwa yedu yekurarama? Mhinduro iri nyore: pasina ivo isu hatingavapo. Ndokusaka iko kufona kuri pasi rese! Isu tinofanirwa kuchengetedza huvepo hweiyi ecosystem uye yeese marudzi ayo anogara mairi. Tinokukoka nhasi, 8 yeJune, kuti uzive uye utore zvirinani kutarisira iri hombe bhuruu hofori.
Kumhanya munguva dzeCovid Inogoneka?
Zvino isu tave ne "mashoma" zvirambidzo uye isu takakwanisa kugadzirisa zvirinani kune mamwe "matsva akajairwa" uye "akaderedzwa kufamba" mamiriro, isu hatigone kuisa parutivi izvo zvatinoda zvakanyanya: mutambo. Tsvaga maitiro ekudzivirira hutachiona kana iwe uchimhanya uye kumhanya munguva dzeCovid!
Ngativei vakatendeseka kune edu ese maIndia Midzimu, mu The Indian Face Isu tinodawo kuti gore rino ripere uye ripere IZVOZVI ... FUCK 2020! Zvino isu tinosiya gore shure uye isu tinopinda imwe nyowani nezvose zvishuwo zvepasirese, 2021 yatinoziva kuti ichave izere nematambudziko matsva asiwo mikana yekubuda, nekuti kushambadzira ... iyo yechokwadi chiitiko, inotimirira isu kunze uko.
Vanogovanisa nevatengesi veanodzvinyirira uye accessories Wholesale
Isu takatanga chirongwa chedu chakazara chevanogovanisa nevatengesi. Isu tiri vatengesi uye vatengesi vezvipfeko, optics uye accessories wholesale uye tinogovera zvigadzirwa zvedu munyika dzinopfuura makumi matatu. Kutengesa kwedu kwakawanda kunosvika kumakondinendi mashanu.
Edurne Pasaban anopemberera gumi regumi ekukunda kwayo kwezuru gumi nezvisere
Pave nemakore gumi kubvira patanzwa munhau dzese kuti sei Edurne Pasaban yakanga ichida kukunda kwakasarudzika kwenhoroondo. Muna May 2010, anoshamisa weSpain mugomo aigona kubudirira chirongwa chake kukunda makomo akakwirira kwazvo papasi repasi, nokudaro achive mukadzi wekutanga munhoroondo kupfekedza gumi nemasere zviuru.
Michael Robinson: zvakanaka kune zvakanaka chaizvo
ABritain aiyemurwa uye anozivikanwa muSpain? Zvinonzwika kunge zvakaoma, asi Michael Robinson akaita kuti zviitike, ne charisma nenyasha dzakabata pfungwa yevose vateveri vemitambo uye akatiita kuti tinzwe zvimwe zvekupokana kwake nekutaura kweSpanish kweBritain.
Kune avo vanomuyeuka zvakanyanya pabasa rake reudiki, uye vamwe vanorangarira zvinangwa zvaakarova semuputsi wePreston North End, Manchester City, Liverpool kana CA Osasuna, nezvimwe zvakawanda.
Álvaro Fernández Fiúza: yedu yenguva mitatu yemakwikwi epasi rose mhare
Vlvaro Fiúza akaberekwa muna 1982 muPontevedra. Ndiye mukwasvi uye akaziviswa katatu mukwikwidzi wepasi rose mumarathon modality. Akatanga basa rake mumutambo uyu aine makore gumi nerimwe chete uye aine makumi maviri nemanomwe, mushure mekuedza kukuru uye nekudzidziswa, akawana mbiri yeEuropean neWorld Marathon, pamwe naEmilio Merchán,
MaSpanish boardboarders vanoshuvira kune zvese zviri muAustria World Championship
VeSpanish snowboarders vanoshuvira zvese zviri muAustria World Championship Nhasi, Ndira 15 na25, iyo Snowboard World Championship ichaitika pachiteshi cheKreischberg (Austria). Pakati peaya mazuva gumi emakwikwi, snowboardcross, halfpipe, slopestyle, parallel SL, zviitiko zvikuru zvichaitwa.
Alvaro Fiuza naWalter Bouzan ndivo vechipiri muOklahoma World Cup
Alvaro Fiuza naWalter Bouzan ndivo vechipiri mumakwikwi eOklahoma World Championship Alvaro Fiuza uye Walter Bouzan ari wechipiri mumakwikwi eOklahoma canoeing world Champions League muK2 Marathon mode. Pano tinokusiya iwe nhoroondo yose yakanyorwa zvakananga naAlvaro Fiuza.
Alvaro Fiuza anokunda wechishanu akatevedzana Sella wedzinza
Alvaro Fiuza anokunda wechishanu akateedzana kubva kuna Sella Nhengo yedu ye The Indian Face TEAM Alvaro Fiuza anokunda Sella wechishanu akateedzana pamwe nemumwe waanoshanda naye Walter Bouzan. Vakunda nhasi, nenguva ye1 awa 6 maminitsi uye nemasekonzi makumi mana nemasere, iyo 43th edition yeInternational Descent yeSella.